बाइबलले मलाई कसरी मदत गर्न सक्छ?—बाइबल पढाइलाई रमाइलो बनाउनुहोस्‌ | युवाहरू सोध्छन्‌
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अरबी (लेबनान) अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अलुर अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको ईवी उज्बेक उज्बेक (रोमन) उड्मुर्त उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू उर्होबो एफिक एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काचिन काजाक काजाक (अरबी) काबुभरदियानु काम्बा कालांगा (बोत्स्वाना) किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज किलुबा किश कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्यामा क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (हुआल्लागा हुआनुको) गा गाउरानी गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चीन (हाका) चुभास चेक जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जाभानिज जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टालियन टिग्रिन्या टेटन डिली टोंगन डच डेनिश तामिल ताहिटी तेलगु त्वी थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (वास्टेका) निऊ नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पंजाबी (शाहमुखी) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पिजिन (पश्चिम अफिका) पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोमेरानियन पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फन फान्टे फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बाओले बाटाक (टोबा) बिकोल बियाक बिस्लामा बुल्गेरियन बेलिज क्रिओल ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा ब्रिटिश साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मराठी मले मल्यालम मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी माल्टिज मिङ्रेलियन मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन रोमानी (भ्लाक्स, रुस) रोमानी (म्यासेडोनिया) रोमानी (म्यासेडोनिया) सिरिलिक लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुन्डा वारे-वारे वेल्श शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सुन्डा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभाक साङ्केतिक भाषा स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
विल नाम गरेका किशोर यसो भन्छन्‌: “बाइबल पढ्‌ने सही तरिका थाह भएन भने पढ्‌न धेरै अल्छी लाग्न सक्छ।”
के तपाईँ बाइबल पढाइलाई रमाइलो बनाउने तरिका थाह पाउन चाहनुहुन्छ? यस लेखले तपाईँलाई मदत गर्नेछ।
धर्मशास्त्रलाई जीवन्त बनाउनुहोस्‌
सरसरती पढ्‌ने मात्र नभएर पढ्‌ने कुरामा डुब्नुहोस्‌। यस्तो तरिका अपनाउन सक्नुहुन्छ:
१. बाइबल विवरण छान्‍नुहोस्‌। आफूले अध्ययन गर्न चाहेको बाइबल विवरण छान्‍नुहोस्‌। कुनै बाइबल घटना वा सुसमाचारको पुस्तकको कुनै भाग छान्‍न सक्नुहुन्छ। अथवा jw.org/ne-मा पाइने बाइबलआधारित श्रव्य नाटकमध्ये कुनै छान्‍न सक्नुहुन्छ।
२. विवरण पढ्‌नुहोस्‌। तपाईँ एक्लै बसेर त्यो विवरण पढ्‌न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्ना साथीहरू वा परिवारसँगै ठूलो स्वरमा पढ्‌न सक्नुहुन्छ। पढाइको भागमा वृत्तान्तलाई एक जनाले र विभिन्‍न पात्रहरूबीचको वार्तालापलाई अरूले पढ्‌न सक्छन्‌।
३. तल दिइएका एउटा वा त्योभन्दा बढी सल्लाह लागू गर्नुभए कसो होला:
विवरणको व्याख्या गर्न चित्रहरू बनाउनुहोस्‌। अथवा घटनाक्रम देखाउनको लागि सरल चित्रहरू बनाउनुहोस्‌। हरेक चित्रमा भइरहेको कुरा बुझाउन त्यसको मुनि केही लेख्नुहोस्‌।
रेखाचित्र कोर्नुहोस्‌। उदाहरणको लागि, तपाईँले कुनै वफादार व्यक्‍तिबारे पढ्‌दै जानुहुँदा तिनले देखाएका गुणहरू र तिनले गरेका कामले गर्दा कस्ता आशिष्‌हरू पाए, सो देखाउन रेखाचित्र कोर्नुहोस्‌।
विवरणलाई एउटा समाचारको रूपमा लेख्नुहोस्‌। घटनालाई विभिन्‍न मानिसहरूको दृष्टिकोणबाट लेख्नुहोस्‌ अनि मुख्य पात्र र प्रत्यक्षदर्शीहरूसँगको “अन्तरवार्ता” पनि समावेश गर्नुहोस्‌।
कुनै पात्रले गलत निर्णय गरेको विवरण पढ्‌दै हुनुहुन्छ भने तिनले राम्रो निर्णय गरेको भए परिणाम के हुन्थ्यो, कल्पना गर्नुहोस्‌। उदाहरणको लागि, पत्रुसले येशूलाई चिन्‍न इन्कार गरेको विवरण विचार गर्नुहोस्‌। (मर्कूस १४:६६-७२) पत्रुसले त्यस्तो दबाब आइपर्दा कसरी राम्रो निर्णय गर्न सक्थे?
तपाईँलाई केही नयाँ कुरा गरूँ-गरूँ जस्तो लागिरहेको छ भने कुनै एउटा बाइबल विवरणबारे आफैले नाटक लेख्नुहोस्‌। त्यस विवरणबाट कस्तो पाठ सिक्न सकिन्छ, त्यो पनि समावेश गर्नुहोस्‌।—रोमी १५:४.
तपाईँ आफ्नो बाइबल पढाइलाई साँच्चै जीवन्त बनाउन सक्नुहुन्छ!
तपाईँले विवरण राम्ररी केलाएर हेर्नुभयो भने त्यसमा भएको गाडधन भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ बाइबल विवरणमा भएको एक-दुई शब्दमा पनि गाडधन भेट्टाउन सक्नुहुन्छ।
उदाहरणको लागि, मत्ती २८:७ र मर्कूस १६:७ तुलना गर्नुहोस्‌।
मर्कूसले किन येशू चाँडै नै चेलाहरू “अनि पत्रुस”-कहाँ देखा पर्नुहुनेछ भनेर बताए?
सङ्‌केत: मर्कूस ती घटनाहरूको प्रत्यक्षदर्शी थिएनन्‌। प्राप्त प्रमाणअनुसार तिनले त्यो जानकारी पछि पत्रुसबाट पाएको हुनुपर्छ।
गाडधन: येशूले पत्रुसलाई फेरि भेट्‌न आउने कुरा बताउनुहुँदा पत्रुसले किन ढुक्क महसुस गरेको हुनुपर्छ? (मर्कूस १४:६६-७२) येशूले कसरी आफूलाई पत्रुसको साँचो मित्र साबित गर्नुभयो? तपाईँ कसरी येशूको अनुकरण गर्दै अरूको साँचो मित्र बन्‍न सक्नुहुन्छ?
तपाईँले शास्त्रपदलाई जीवन्त बनाउनुभयो र उक्‍त विवरणबारे थप जानकारी खोजतलास गर्नुभयो भने बाइबल पढाइ अझ रमाइलो हुन्छ।
“कहिलेकाहीँ म एउटा अध्याय छान्छु र नबुझेसम्म त्यसबारे खोजिरहन्छु। त्यसो गर्दा मैले पहिला कहिले पनि नदेखेको नयाँ कुरा पत्ता लगाउन सकेको अथवा मलाई राम्रोसँग थाह नभएको कुरा अहिले बुझेको जस्तो लाग्छ। यसरी खोजतलास गरेर पढ्‌दा हरेक चोटि साह्रै मजा आउँछ।”—बोनी
“मैले रूथको किताब पढेँ र त्यो किताबको अर्थ अझ राम्रोसँग बुझ्न वाचटावर लाइब्रेरी प्रयोग गरेँ। म यो लाइब्रेरी प्रयोग गर्न अरूलाई पनि सुझाव दिन चाहन्छु। यसरी बाइबल पढ्‌नु कति रमाइलो हुँदो रहेछ भनेर मैले बुझेँ।”—तिमोथी
“समूहमा बाइबल पढ्‌न धेरै रमाइलो हुन्छ। प्रत्येकले फरक-फरक पात्रको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्‌ अनि नाटकको लिपिजस्तै गरी पढ्‌न सकिन्छ। मलाई jw.org/ne-मा पाइने बाइबलआधारित श्रव्य नाटकहरू पनि मन पर्छ। त्यस्तो पढाइ सुन्दा बाइबलका घटनाहरू जीवन्त हुन्छन्‌।”—इसाबेल
बाइबल पढाइ: पढाइलाई केले रोचक बनाउँछ?
अनुवाद, प्रविधि, बाइबल अध्ययन सामग्री र बाइबल पढ्‌ने विभिन्न तरिकाले बाइबल पढाइलाई रोचक र रमाइलो बनाउँछ।
बाइबल किन पढ्‌नुपर्छ?—लामो भिडियो
संसारका लाखौँ मानिसले जीवनका महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नहरूको जवाफ बाइबलबाट पाएका छन्‌। के तपाईँ पनि यस्ता प्रश्‍नहरूको जवाफ पाउन चाहनुहुन्छ?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने बाइबलले मलाई कसरी मदत गर्न सक्छ?—भाग २: बाइबल पढाइलाई रमाइलो बनाउनुहोस्‌